Day 8: Wararkii ugu danbeeyey Dagaalada Muqdisho • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Federal Republic of Somalia / Day 8: Wararkii ugu danbeeyey Dagaalada Muqdisho
Day 8: Wararkii ugu danbeeyey Dagaalada Muqdisho
Magaaladda Muqdisho ayaa waxaa kasii soconaaya dagaal xoogan oo galay maalintii 8-aad kaas oo u dhaxeeya Ciidamada Dawladda Federaalka oo gacan ka helaaya kuwa AMISOM iyo kooxaha mucaaradka ee kasoo horjeeda.
Caawa ayaa laga maqlaaya xaafado badan oo ka tirsan magalada Muqdisho duweyn aad u ba’an, madaafiicda ayaa ku hoobanaysa xaafadihii lagu dagaalamay, iyada oo cabsi aad u ba’an dadka ku abruurtey hugunka madaafiicda.
Dhanka kale dagaalkii maanta ayaa ahaa mid si goos goos ah uga soconaayay degmooyinka lagu dagaalamaayay sida Howlwadaag iyo Hodan iyadoo dagaal kale uu ka dhacay degmada Boondheere ee Waqooyiga magaaladda.
Labada dhinac ayaa isku adeegsaday hubka dhawaaqooda aadka u culus oo laga wada maqlaayay magaaladda,waxaana jiraa sidoo kale in madaafiic ay ku dhaceen Suuqa Bakaaraha iyo meelo kale ay geysteen khasaaro.
Khasaaraha ka dhashey dagaalka ayaa iminka lasoo sheegaaya in ay ku dhinteen maanta oo keliya inka badan 6-qof oo rayid ayna ku dhaawacmeen inka badan 10-qof oo la geeyey isbitaalada.
Caawa ayaa magaaladda laga maqlaaya duqeymo culus oo la sheegay in ay geysanayaan Ciidanka AMISOM oo maalmahaan difaac adag ku jirey iyagoo difaacayay wadada Makka Al-Mukarama oo muhiim u ah madaxda Dawladda iyadoo Xarakadda Al-Shabaab ay dooneyso in ay kala jarto.
Afhayeenka AMISOM ayaa maanta warbaahinta u sheegay in afar askari ay ku dhinteen xarunta madaxtooyada oo AMISOM ah isla markaasna ilaalo ka ahaayeen kadib markii lagu riday hoobiye,iyadoo 8-kale ay dhaawacmeen.
Xarakadda Al-Shabaab Sarkaal u hadlay ayaa maanta sheegay in ay dileen dhowr iyo toban askari oo ka tirsan AMISOM,balse Afhayeenka AMISOM ma tilmaamin cidda ka dambeysay dilka askartaas.
Ilaa iyo hadda ma jirto wax natiijo ah oo kasoo baxay dagaalka todobaadki labaad kasoconaaya magaaladda Muqdisho, aan ka ahayn dhimashada dadka rayidka ah oo boqol kor u dhaaftey iyo dhaawaca oo buuxiyey Isbitaalada, taas oo ay dheertahay burbur ku yimid ganacsigii magaalada.